Iyo itsva vhezheni yeMX Linux 19 "Ugly Duckling" inosvika, yakavakirwa paDebian 10, XFCE 4.14 uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeMX Linux 19 "Ugly Duckling" inosvika, yakavakirwa paDebian 10, XFCE 4.14 uye nezvimwe
Vhiki rapfuura vhezheni itsva ye kumwe kwekugovera uko maererano neDistrowatch saiti, yave iko kushandiswa kwakanyanya kweLinux pakati pevashandisi veLinux (zvinoenderana nehuwandu hwavo), isu tiri kutaura MX Linux, iyo inouya neshanduro yayo yakavandudzwa "MX Linux 19".
Kune avo vasingazive neMX Linux, iwe unofanirwa kuziva kuti eIyi isisitimu yekushandisa inoenderana neshanduro dzeDebian dzakagadzikana uye izvozvo inoshandisa yakakosha zvinhu zveantiX, iine software yekuwedzera yakagadzirwa uye yakarongedzwa nenharaunda yeMX, chaizvo inoshanda sisitimu inosanganisa inoyevedza uye inoshanda desktop ine marongero akareruka, kugadzikana kwepamusoro, kugadzikana kuita uye shoma nzvimbo.
Iyo inovandudzwa sekambani yemubatanidzwa pakati peiyo antiX uye dzaimbove nharaunda dzeMEPIS, nechinangwa chekushandisa maturusi akanakisa yega yega yezvipo izvi.
1 About MX Linux 19 «Yakashata Duckling»
2 Dhawunirodha uye edza MX Linux 19
About MX Linux 19 «Yakashata Duckling»
Iyo MX Linux timu yakaburitsa vhezheni nyowani yekupararira kwavo kweDebian neAntix. Iyo yazvino vhezheni yeprojekti, MX Linux 19 «yakaipa duckling» inosvika nenhau dzakasiyana siyana uye shanduko huru maererano nemamiriro ehurongwa.
Mune vhezheni itsva yekuparadzira, sechinhu chikuru chinozikanwa chinoratidzwa kuti hwaro hwehurongwa hwakagadziridzwa kuDebian 10 "Buster" pamwe nemamwe mapakeji kubva kuzvazvino antiX uye MX zvinyorwa.
Padivi redesktop, yakagadziridzwa kuita XFCE 4.14. Uyen iyo desktop yeiyi nyowani vhezheni, iyo XFCE pani iri kuruboshwe kuruboshwe rwechidzitiro, kuwedzera kune tinogona kuwana Conky yakaiswa nekusarudzika uye yakagadzirirwa kuitira kuti nguva uye kushandiswa kwesisitimu zviwanikwa zvionekwe pachiratidziri. Iyo wachi inoratidzwawo kumusoro kwepaneru rekuruboshwe.
Nezve desktop desktop MX Linux, inopa iyo MX Tweak chirongwa chinova chishandiso chekugadzirisa yakapusa yakagadzirwa nevagadziri kuti vakurumidze uye nyore kugadzirisa desktop.
Kune rimwe divi isu tinogona zvakare kuwana MX Zvishandiso, izvo mushandisi anogona kuisa iyo vhidhiyo uye odhiyo codecs nekudzvanya kamwe chete, gadzirisa network, fomati iyo USB flash drive, uye gadzira iyo system mufananidzo.
Nezve iyo system kurongedza, iwo akagadziridzwa mavhezheni e kunyorera, kusanganisira GIMP 2.10.12, Mesa 18.3.6, Linux Kernel 4.19, VLC 3.0.8, Clementine 1.3.1, Thunderbird 60.9.0, LibreOffice 6.1.5 (kuburikidza mx-packageinstaller, LibreOffice 6.3 kubva backports iripowo) .
Chimwe chinhu chitsva chinoratidzika ndechekuti iyo mugadziri mx-simaki (yakavakirwa pamhara-inosimudza) yakagamuchira kuvandudzwa sezvo vagadziri vakagadzirisa nyaya nekuzvigadzirisa uye kupatsanura diski.
Wakawedzera newadhi widget, iyo formatusb yekushandisa kuomesa madhiraivha e USB uye iyo bash-config yekushandisa kumisikidza kuoneka kwetambo yekuraira. Iyo mx-yekuzivisa pasuru yakaitwa kuti itumire nekukurumidza zviziviso kune vashandisi.
Yakagadziridzwa Wallpaper (mx19-mifananidzo). Mx-boot-kugadzirisa inowedzera kutsigira kwe bootloader kupora kana uchishandisa zvikamu zvakavanzika. Saver saver yakawedzerwa kuRarama Gungano uye imwe X server bhutsu modhi yakaitwa kana grafiki chikamu chisingakwanise kumisikidzwa.
Dhawunirodha uye edza MX Linux 19
Iyo default desktop ndeye Xfce. Seti dze 32 uye 64 mabiti anowanikwa kurodha pasi, ane saizi ye1.4 GB.
Minimum zvinoda kuiswa MX Linux 19
• CD / DVD drive uye BIOS inotsigira kubhowa kubva kune ino dhiraivha kana Live USB uye BIOS inotsigira kubhowa kubva kuUSB
• Intel kana AMD i486 processor
• 512 MB ye RAM ndangariro
• 5 GB yemahara hard disk space
• SoundBlaster, AC97 kana HDA inoenderana kadhi rezwi
• Kuti ushandise Live USB, 4GB yemahara nzvimbo inokurudzirwa
Kuti utore iyi vhezheni itsva yekuparadzira unogona kuenda wakananga kune webhusaiti mukuru weprojekiti umo muchikamu chayo chekurodha unogona kuwana mufananidzo weiyo system.
Iwe unogona kusevha iyo mufananidzo nerubatsiro rweEtcher pane USB
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo itsva vhezheni yeMX Linux 19 "Ugly Duckling" inosvika, yakavakirwa paDebian 10, XFCE 4.14 uye nezvimwe
Yakanaka uye inoshamisa distro. Ini ndinayo seiyo hombe OS kubva musi wawakabuda uye chokwadi hachimboregi kundishamisa. Yakakurudzirwa. Iwe unokodzera nzvimbo yepamusoro muDrawrowatch.
Kunyanya kutaurwa kwezvayo zvishandiso izvo zvinounza: Ivo VANoshamisika!
Ini ndaive neZorin OS muLite vhezheni uye iyo OS pachayo, yakashanda mushe, asi pandakavhura Firefox muZorin, zvese zvakaitika, iyo OS yaizopunzika dai ndakanga ndisina kubata mbeva kwechinguva, kamwe kamwe yeFirefox yakaenda kuwindo idzva rekubhurawuza ... Yakatanga kudzikira uye kupindura zvisirizvo, iine mana chete matabhu akavhurwa uye ndisina imwe application yakavhurwa ... Yese, ndakazviudza kuti ndiedze MX Linux uye nezuro ndakariisa, izvozvi, zvese zvakanaka, ini ndakasiya Firefox yakavhurika ine 4 tabo kwemaawa akati wandei, pasina kubata chero chinhu uye iyo system haina kupunzika senge muZorin. MX Linux inotaridzika zvakanaka, inouya izere nemaapplication uye inoshanda nekukurumidza, ini handikwanise kutaura nezve kugadzikana kwayo, asi musimboti, usaite zvakafanana kwandiri saZorin neFirefox, yatove poindi yakakura kwazvo its favour.
Ndinokurudzira? Ehe saizvozvo, iko kwekutanga kusangana kwave kuri kukuru uye, kana kuchiramba kuchishanda ichi mushe, kucharamba kuri seyangu yekushandisa system
Iyo nyowani vhezheni yeAsterisk 17 inosvika, iyo yakavhurwa sosi yeVoIP fomati